DEG DEG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo goordhaw tawbar usoo xiray ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo goordhaw tawbar usoo xiray ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska Soomaaliya
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daqiiqado kahor tawbar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo in muddo ah tawbar ku qaadanayay garoonka diyaaradaha Bali-doogle ee gobolka Sh/hoose.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ay la socdaan taliyeyaal iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa saakay kasoo amba-baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyagoona markii dambe soo gaaray garoonka Bali-doogle ee gobolka Sh/hoose.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tawbarka usoo xiray ciidamada kumaandooska ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo in muddo ah tawbar ku qaadanayay garoonka diyaaradaha Bali-doogle ee gobolka Sh/hoose, iyadoona sida la ogyahay ciidamadaasi ay yihiin kuwa qeyb weyn ka qaatay la dagaalanka kooxda Al-shabaab.
Ciidamadaasi Kumaandooska ah ayaa sidoo kale fuliyay howlgalo balaaran oo ka dhan ah kooxda Al-shabaab, islamarkaana lagu dilay hogaamiyayaal muhiim u ahaa Al-shabaab.
Dhinaca kale, garoonka Bali-doogle waxaa degan ciidamada kumaandooska ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo Mareykan ah, kuwaas oo halkaasi ciidamada ku siiya tawbarada kala duwan.